Maalinta cunnada adduunka - 11 cunto oo kaa yaabin doona - BBC News Somali
Dad fara badan, ma jecla iney cunaan doolshaha ama keegga ka sameysan burka, dixiriga iyo ukunta ee uu marsanyahay burcadka oo afka qalaad lagu yiraahdo (maggot-ridden cheese), qaarkoodna maba lagu soo hadal qaadi karo ama wayba ka naxayaan.
Laakiin bal wareyso dadka ku nool Jasiiradda ku taalla Talyaaniga ee la yiraahdo Sardinia.
Isla markiiba waxaa billowda in bushimahooda uu dhareer ka soo daato, sida ay raashinka noocaas ah u jecelyihiin awgeed. Hadallo farxad leh ayay ku dhihi lahaayeen luqadda talyaaniga, haddii lagu marti qaado hal jeex oo doolshadaas ah. Balse cuntada noocaas ah kuma jirto liiska raashinka laga cuno dalka ingiriiska iyo meelo kale oo ka mid ah caalamka, waxaana loo arkaa raashin lagu yaqyaqsoodo.
Dhaqannada kala duwan ayaa cuntooyinka qaar u arka kuwo lagu lalaboodo, halka kuwa kalena ay u arkaan raashin fiican oo la xiiseeyo.
31ka bishan Oktoobar, Madxaf lagu soo bandhigo raashinka laga yaqyaqsoodo ayaa laga furayaa magaalada Mälmo ee dalka Sweden, ka hor inta aan loo sii gudbinin qeybaha kale ee caalamka.
Dadka ku nool wasakhda Nairobi
Cunto la'aan ka jirta Koonfurta Afrika
Howsha madxafkaas ayaa ku saabsan in lagu eego waxyaabaha ay suurta galka tahay inaan afkeenna galin karno iyo in kale.
"Cuntadu waxay astaan u tahay nooca uu yahay dhaqankeenna waxaana saameyn baaxad weyn ku leh meelaha aan ku kornay", ayuu yiri Samuel West, oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha caafimaadka oo ka tirsan dadka qaban qaabiyay madxafkaas.
"Howshan lagu cirib tirayo waxa loo yaqaanno cuntada laga yaqyaqsado ayaa naga caawin doonta inaan ka hortagno cudurro, iyo inaan mar walba raashin ka dhiganno cuntooyin uusan caafimaadkeenna ku jirin, balse maadaama ay arrintan khuseyso dareenka caalamiga ah, cuntooyinka loo aqoonsaday iney yihiin kuwo laga yaqyaqsoodo, ma aha sida loo maleynayo".
"Waa muhiim in dadka laga dhigo kuwo ka waantooba waxyaabaha laga dhaadhiciyay ee ku saabsan cuntooyinka qaarkood, sababtoo ah hadda waxaa la joogaa wakhtigii aan eegi lahayn saameynta deegaanka ka soo gaari karta waxyaabaha aan cuneyno", ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii watay, tusaalena ka dhiganayay dabaal degga maalinta raashinka adduunka ee ku beegan 16ka bisha Oktoobar.
West iyo khabiir ay wada shaqeeyaan oo lagu magacaabo Anders Ahren ayaa ku wareegay caalamka si ay u soo daraaseeyaan noocyada raashinka la isticmaalo, iyagoo tusaalooyin ka soo qaatay meelo badan oo ka tirsan dunida.
300 oo noocyo raashin ah ayay soo tijaabiyeen, 80 ka mid ah ayaa noqday kuwo mudan in madxafka lagu soo bandhigo, kuwaasoo sidoo kale aan ka heli doonno waxa uu Arhn ku qeexay "khibrad layaab leh".
"Dadku waxay fursad u heli doonaan iney ursadaan oo dhadhamiyaan cuntooyin loo kala bad-baddali doono" ayuu yiri.
"Ma yeelan doontaa geesinimada aad ugu bareereysid tijaabinta cuntooyinkaas? Halkan waxaa ku xusan qaar ka mid ah noocyada cuntooyinkaas lagu soo bandhigayo madxafka.
Maggot-ridden cheese (Italy) - oo ah nooc burcad ah oo laga sameeyay, dixiri, bur, ukun iyo burcad, taasoo ah cunto Talyaani
Lahaanshaha sawirka Anja Barte Telin
Image caption Iibinta burcadkan oo sidoo kalena loo yaqaanno casu marzu ayaa loo mamnuucay sababo la xiriira in uusan caafimaadka u roonayn
Gasac idil oo burcad ah ayaa la furay waxaana lagu shubay doolshada waxaana dhexda laga galiyay ukun iyo dixiriyaal fara badan. Doolshada ayaa markaas u ekaaneysa sidii inuu dhacaan dixiri ku dhex jiro.
Dadku markey cunayaan haddii ay iska ilaaliyaan iney ruugaan dixiriga waxay gali karaan halis iyagoo laqaya dixiri nool nool, maadaama laga yaabo iney dixiriyaashu ku xoogeystaan caloosha qofka kuna dhagaan darbiyada mindhicirrada.
Iibka raashinkan oo loo yaqaanno "casu marzu" ayaa laga mamnuucay waddamada Yurub, sababo caafimaad awgood.
Xubinta taranka ee Dibiga (China) - oo ah cunto Shiineys
Image caption Shiinaha, xubinta taranka ee dibiga ayaa aad caan uga ah in la cuno.
Xubinta taranka ee dibiyada waxaa loo cunaa sababo lagu sheegay faa'iidooyin caafimaad oo uu leeyahay, inkastoo la sheego inuu waxyeello u geysto awoodda taranka.
Sida laga soo xigtay khubarada, haweenka ayey u wanaagsantahay iney cunaan qeybaha cad ee hilibka ku yaalla xubintaas, halka raggana ay u wanaagsantahay iney cunaan qeybihiisa madow.
Ayax la dubay (Uganda) - oo ah cunto laga isticmaalo Uganda
Halki laga isticmaali lahaa baradho la warshadeeyay oo la qallajiyay, ayaxa la dubay ayaa si weyn looga dalbadaa makhaayadaha dalka Uganda iyo waddamo kale oo ku yaalla qaaradda Africa.
Dadka dhinaca cuntada ku xeel dheer ee dalalkaas waxay ku taliyaan in lagu cabo khamriga.
Muddo dheer ayaa laga mamnuucayay haweenka waddamadaas iney cunaan ayaxa, iyadoo la aaminsanyahay in haddii ay cunaan ay dhalayaan carruur madaxoodu uu u egyahay Ayax.
Ukumaha quraanjada iyo dixiriga (Mexico) - oo ah cunto laga isticmaalo dalka Mexico
Sida ay sheegeen dadka cilmiga u leh taariikhda, ukumaha quraanjada ee laga soo saaro geedaha iyo dixiriyaasha ayey raashin ahaan u isticmaali jireed dad ku noolaan jiray waddamo maanta loo yaqaanno dalka Mexico.
Raashinka noocaas ah ayay ku dubi jireen basbaas waxaana loo tix galin jiray qaar ka mid ah cuntooyinka ugu wanaagsan.
Khubarada ayaa intaas ku dartay in raashinka noocaas ah uu aad qaali u ahaan jiray.
Wadnaha maska Kobraha (Vietnam) - oo ah cunto laga isticmaalo dalka Vietnam
Raashinka noocan ah dalka Vietnam waxaa looga aaminsanyahay inuu kordhiyo awoodda jir ahaan iyo tan maskax ahaanba. Wadnaha maska loo yaqaanno Kobraha waa raashin aad looga qiimeeyo dalkaas.
Xayawaankaas ayaa la dilaa ka dibna biyo lagu karkariyaa, qeybaha kale ee jirkiisana waxaa sidoo kale loo adeegsadaa cunto ahaan.
Wadnaha waxaa si caadi ah loo galiyaa dhalooyin suuqa lagu iibiyo.
Haddii aad dhaqdo waxaad arki kartaa in uu ka baxayo dhiiga maska.
Indhaha iyo maskaxda Idaha (Iran, Afghanistan & Iraq) - oo ah cunto laga isticmaalo dalalka Iiraan, Afqaanistaan iyo Ciraaq
Lahaanshaha sawirka Mo Styles
Qaadiro ma kugu qabatay magaalooyinka Tehraan, Kaabuul ama Baqdaad?
Waxaa laga yaabaa in marar badan lagugu marti qaaday raashin isugu jira madax, minjo iyo calool Ido.
Waxaa loo arkaa iney tahay cunto aad u qiimo badan oo habeen lagu seexan karo.
Xitaa lama khasaarinin indhaha neefkaas.
Dhiig doofaar oo la kariyay (UK) - oo ah maraq laga isticmaalo dalka Ingiriiska
Quraac dhaqameed wanaagsan oo Ingiriis ah waa inuu qeyb ka ahaado dhiig doofaar oo la karkariyay iyo qeybo ka mid ah dhiigaas oo la qallajiyay ka dibna la dubay.
Waxaa loo tix galiyay in laga helo dhowr macdan oo jirka u fiican oo kala ah Iron, Zinc iyo burutiin.
Cabitaan laga shiiday Rah (Peru) - oo ah cabitaan laga isticmaalo dalka Peru
Wuxuu ka mid yahay cabitaannada ugu wanaagsan ee ay dadka u dhashay dalkaas isticmaalaan.
Waxaa lagu daraa malab, ukun iyo basbaas.
Cabitaankan la isku qasay ayaa suuqyada loogu iibiyaa si ay dadka uga helaan awood tamar oo dheeraad ah.
Hilibka shafka digaagga oo la macaaneeyay (Turki) - oo ah raashin laga isticmaalo dalka Turkiga
Hilibka digaagga oo lagu macmacaansado.
Raashinkan waxaa dalka Turkiga looga yaqaannaa tavuk gogsu waxayna ahayd cunto la soo isticmaali jiray ilaa dowladdii boqortooyada Cusmaaniyiinta.
Cunta dhaqameedkan ayaa laga sameeyaa hilibka ku yaalla qeybta xabadka ee digaagga oo lagu daray caano, Sonkor, bariis, rooti iyo qorfe.
Cabitaan lagu dhex riday Jiir maqaarka laga bixiyay (China) - oo ah cabitaan laga isticmaalo dalka Shiinaha